‘म्यान अफ द सिरिजमा मेरो नाम बोलाउँदा विश्वासै लागेन’– अविनाश बोहरा - खेलकुद - नेपाल
‘म्यान अफ द सिरिजमा मेरो नाम बोलाउँदा विश्वासै लागेन’– अविनाश बोहरा
सल्यानका अविनाश बोहरा, २१, तीन दिवसीय टी–ट्वान्टीको डेब्यु खेलमै दुबईको घरेलु टिमलाई हराउँदा ‘म्यान अफ द सिरिज’ भए । अविनाशसँगको कुराकानी :
घरेलु लिगमा ठूलो सफलताबिनै एक्कासि अन्तर्राष्ट्रिय उपलब्धि हात लाग्यो नि ?
चार वर्षदेखि निरन्तर मिहिनेत साथ क्रिकेट खेलिरहेको छु । घरेल लिग खेल्दा राम्रा टिम र खेलाडी प्रतिस्पर्धी थिए । यसले आत्मबल दियो । सिक्ने मौका मिल्यो । पारस खड्काले सधैँ सकारात्मक कुरा मात्रै सिकाउनुभयो ।
राष्ट्रिय टिमबाट डेब्यु खेलमै यत्रो व्यक्तिगत सफलता पाउने अपेक्षा थियो ?
मैले नै पाउँछु भन्ने सोचेको थिइनँ । म्यान अफ द सिरिजमा मेरो नाम बोलाउँदा विश्वासै लागेन ।
क्रिकेटर बन्नुको खास कारण ?
बच्चादेखि खेल्थेँ । तर म आर्मी (भारतीय) बन्न चाहन्थेँ ।
आर्मीको सपना देख्ने ठिटो कसरी बल र ब्याट समात्न पुग्यो ?
सेनामा भर्ना हुने केही कागजात बनेनन् । त्यसपछि पूर्ण रुपमा क्रिकेट खेल्न लागियो ।
आर्मी बन्न नपाएकामा दु:ख लाग्दैन ?
बिल्कुल लाग्दैन । सेनामा भर्ती भएको भए यो तहको सफलता पाउँदिनथेँ होला ।
आजीवन क्रिकेटमै बिताउने ?
क्रिकेटबाहेक अर्थोक सोचेकै छैन ।
खेलेर जीवन निर्वाह गाह्रो हुन्न ?
छ,बिस्तारै आर्थिक र पारिवारिक जिम्मेवारी बढ्छ । सरकारले खेलमा राम्ररी लगानी गरिदिए हुन्थ्यो । किनभने, खेल र खेलाडीले विश्वमा देशलाई चिनाउने गर्छन् । नेपालको नामै नसुनेकाले पनि क्रिकेटमा पाएको उपलब्धिले चिनिरहेका छन् ।
आफ्नो खेलमा कुनै कमजोरी ?
हाम्रो फिटनेस अन्य अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको दाँजोमा राम्रो छैन । ममा त्यो कमजोरी देख्छु ।
अबको लक्ष्य के छ ?
विश्वकपट्रफी उचाल्ने ।
प्रकाशित: माघ २७, २०७५
‘फ्यान सपोर्ट हाम्रा लागि बाह्रौँ खेलाडी, दुर्भाग्यवश हामी बाह्रौँ खेलाडीविहीन हुँदै छौँ ।’
स्टार बलर नचल्दा